जो आफ्ना आमाबाबु मर्दा पनि हाँसिरहन्छन्
आमा र बच्चाले चाहेको कि नचाहेको जन्म ? अभिभावकले बोल्नु परेको छ । सरकार मौन छ ।
बौद्घिक अपाङ्गता रोग होइन, अवस्था हो । न त आमाले चाहेर बौद्घिक अपाङ्गता बच्चा जन्माएको हुन्छिन् त छोराछोरीले चाहेर जन्मेका हुन्छन् । जब एउटी आमाको कोखमा एउटा भु्रणले जन्म लिन्छ । हुनेवाला आमा साथै परिवारका हरेक सदस्यले उक्त बालक वा बालिकासँग जोडेर अनेक सपनाहरु देखेका हुन्छन् । नेपालको मातृ स्वास्थ्य त्यति बलियो छैन कि गर्भावस्थामा बच्चाको स्थिति कस्तो छ भनेर पत्ता लागेको हुँदैन । यदि बच्चा अपाङ्गता छ भनेर थाहा पाएको खण्डमा उक्त बच्चा जन्मन पाउँदैन अवश्य मृत्यु नै हुने हो । अधिकाँश बच्चाको अवस्था आमाको पेटमा कस्तो छ भनेर थाहा पाएको अवस्था भने कमै छन् ।
जब बच्चा बौद्घिक अपाङ्गतासँग जन्मन्छ अनि उसको कठिन यात्रा शुरु हुन्छ । अवस्थाको पहिचान छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्ने भएको छैन । मानिस सबै समान छैनन्, बौद्घिक अपाङ्गता भएका बालबालिका व्यक्ति पनि समान छैनन् । कतिपय बच्चाले आमाको दुध चुस्न सक्दैनन् । बच्चा हुर्कने क्रममा बालबिकासक्रम ढिला हुन पुग्छ २,३ महिनाको उमेरमा आमाको आवाज आएतिर बच्चाको प्रतिकृया आउँदैन । ६,७ महिनामा बामे सर्न सक्दैनन् । हिँड्ने उमेरमा हिँड्न सक्दैनन् । माथिका सबै कृयाकलाप समयमा सामान्य रुपमा भए पनि कतिपय बालबालिकामा व्यवहार र भाषामा समस्या आएको छ । यो अवस्था कुनै औषधी प्रयोग गरेर वा धामीझाँक्री लगाएर पनि निको भने हुँदैन । उनीहरुले विद्यालयमा भर्ना भएर पढ्न पाएका छैनन् । रोजगार छैनन् । स्वास्थ्य उपचारमा कुनै ब्यवस्था छैन । छारे रोगको औषधी पनि किनेर खान गरेको अवस्था छ । कतिपयलाई व्यक्तिगत सम्बन्धको बारेमा थाहा छैन थाहा हुनेहरुले आफूले चाहेका व्यक्तिसँग वैवाहिक जीवन बिताउन पाउने अवस्था छैन । कुनै पनि सामाजिक कृयाकलापमा निर्वाध रुपमा सामेल हुन पाएका छैनन् । कतिपयले आफ्ना कुरा बोलेर ब्यक्त गर्दछन् भने कतिले बोल्न पनि सक्दैनन् । बौद्घिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु पनि नेपाली नागरिक हुन् तर नागरिक भएर बाँच्न पाएका छैनन् । उनीहरु पनि समान अधिकार पाउन चाहन्छन् तर आवाज राख्न भने सक्दैनन् । उनीहरुको लागि अभिभावकले बोल्नु परेको छ । सरकार भने मौन छ ।
यी माथिका समस्याहरुको आधारमा बौद्घिक अपाङ्गतालाई मात्राको आधारमा ४ प्रकारमा बाँडिएको छ । यसको आधारमा अपाङ्गता पचियपत्र सरकारले वितरण गरेको अवस्था छ । हरेक व्यक्तिमा विविधता हुन्छ भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन ।
१. हल्का बौद्घिक अपाङ्गता
२. मध्यम बौद्घिक अपाङ्गता
३. अति असक्त बौद्घिक अपाङ्गता
४. पूर्ण असक्त बौद्घिक अपाङ्गता
हल्का बौद्धिक अपाङ्गता
अर्को मानिस वा सहयोगीको सहयोगमा सामान्य जीवन बिताउन सक्ने अवस्थाका व्यक्तिहरु जो सामान्य लेखपढ गर्न सक्छन् । उनीहरुलाई हल्का मात्राको बौद्घिक अपाङ्गता भनिन्छ । उनीहरुले पैसाको नोट चिनेका हुन्छन् तर प्रयोग गर्दा कतिको किन्दा कति फिर्ता आउँछ भन्ने थाहा पाउँछन् पनि पाउँदैनन् पनि र निजामती कर्मचारीको आरक्षण कोटामा योग्यता पुगेको हुदैँनन् । नजिकको साइनो लगाउन जानेका हुन्छन् । आफ्नो सामान्य परिचय दिन जानेका हुन्छन् । कतिपय बालबलिकाहरुको विद्यालय पहुँच पुगेको खण्डमा ८-९ कक्षासम्म पढ्न पनि सक्छन् । अक्षर हेरेर सार्न सक्छन् । तर, के पढें भन्ने हेक्का राख्न भने सक्दैनन् । सामान्य दैनिक जीवनयापनको कार्यहरु गर्न सक्ने हुन्छन् । आफै खान भने सक्छन् । खतराको आभाष हुन्छ तर कतिपय अवस्थामा जोगिन सक्दैनन् । कुनै कुरा सिकाएको खण्डमा अर्को मानिस वा सहयोगीको सहयोगमा गर्न सक्छन् । व्यक्तिगत सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सक्दैनन् । कोहि आफै आक्रामक हुन्छन् ।
मध्यम बौद्धिक अपाङ्गता
अर्को मानिस वा सहयोगीको सहयोगमा सामान्य जीवन बिताउन कठिन अवस्थाका व्यक्तिहरु जो सामान्य लेखपढ गर्न सक्दैनन् । उनीहरुलाई मध्यम मात्राको बौद्घिक अपाङ्गता भनिन्छ । उनीहरुले पैसा (नोट ५, १० को) चिनेका हुन्छन् तर प्रयोग गर्दा कतिको किन्दा कति फिर्ता आउँछ भन्ने थाहा पाउँछन् पनि पाउँदैनन् पनि र निजामती कर्मचारीको आरक्षण कोटामा योग्यता पुगेको हुँदैन । नजिकको साईनो लगाउन जानेका हुन्छन् ।
आफ्नो सामान्य परिचय दिन जानेका हुन्छन् पनि हुँदैनन् पनि । कतिपय बालबलिकाहरुको विद्यालय पहुँच पुगेको खण्डमा अक्षर चिनेका हुँदैनन् तर चित्रको माध्यमबाट कहि दैनिक जीवनको कृयाकलाप जानेका हुन्छन् । पढे भन्ने हेक्का राख्न सक्दैनन् । आफै खान भने सक्छन् । खतराको आभाष गर्न सक्दैनन् । कसैले सांघातिक हमला गरेको खण्डमा प्रतिकार गर्न सक्दैनन् । व्यक्तिगत सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सक्दैनन् । कोहि आफै आक्रामक हुन्छन् ।
अति असक्त बौद्धिक अपाङ्गता
निरन्तर अर्को मानिस वा सहयोगीको सहयोगमा सामान्य जीवन बिताउन कठिन अवस्थाका ब्यक्तिहरु जस्ले सामान्य लेखपढ गर्न सक्दैनन् । उनीहरुलाई अति अशक्त्त मात्राको बौद्घिक अपाङ्गता भनिन्छ । उनीहरुले पैसाको नोट चिनेका हुँदैनन् । निजामती कर्मचारीको आरक्षण कोटामा योग्यता पुगेको हुँदैन । नजिकको साईनो लगाउन जानेका हुँदैनन् । आफ्नो सामान्य परिचय दिन जानेका हुँदैनन् । कतिपय बालबलिकाहरुको विद्यालय पहुँच पुगेको खण्डमा लेखपढ् गर्न जानेका हुँदैनन् । चित्रको माध्यमबाट दैनिक जीवनको कृयाकलाप जानेका हुँदैनन् ।
पढे भन्ने हेक्का राख्न भने सक्दैनन् । दैनिक जीवनका कृयाकलाप सबै अर्को मानिसले गरिदिनु पर्ने हुन्छ । यस प्रकारका बौद्घिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति (छोरी)हरुले आफ्नो महिनावारी हुँदा स्याहार गर्न सक्दैनन् । कसैले आफूमाथि सांघातिक हमला गर्दा पनि प्रतिकार गर्न सक्दैनन् तर कुनै बखत शरीरको अगं प्रयोग गरेर ईसारा भने गर्न सक्छन् । खतराको आभाष गर्न सक्दैनन् । व्यक्तिगत सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सक्दैनन् । कोहि आफै आक्रामक हुन्छन् ।
पूर्ण असक्त बौद्धिक अपाङ्गता
निरन्तर अर्को मानिस वा सहयोगीको सहयोगमा सामान्य जीवन बिताउन कठिन अवस्थाका व्यक्तिहरु, जसले सामान्य लेखपढ गर्न सक्दैनन् । उनीहरुलाई पूर्ण असक्त मात्राको बौद्घिक अपाङ्गता भनिन्छ । उनीहरुले पैसाको नोट चिनेका हुँदैनन् । निजामती कर्मचारीको आरक्षण कोटामा योग्यता पुगेको हुँदैन । नजिकको साइनो लगाउन जानेका हुँदैनन् । आफ्नो सामान्य परिचय दिन जानेका हुँदैनन् । कतिपय बालबलिकाहरुको विद्यालय पहुँच पुगेको खण्डमा लेखपढ गर्न जानेका हुँदैनन् । चित्रको माध्यमबाट दैनिक जीवनको कृयाकलाप समेत जानेका हुँदैनन् । पढे भन्ने हेक्का राख्न सक्दैनन् । दैनिक जीवनका कृयाकलाप सबै अर्को मानिसले गरिदिनु पर्ने हुन्छ । यस प्रकारका बौद्घिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति (छोरी)हरुले आफ्नो महिनावारी हुँदा स्याहार गर्न सक्दैनन् । भावनात्मक संवेगात्मक साट्न जानेका हुदैंनन् । जस्तै, आफ्नो बाबुआमा मर्दा पनि हाँसिरहेका हुन्छन् ।
अधिकाँशले बोलेर व्यक्त गर्न सक्दैनन् । कसैले आफूमाथि सांघातिक हमला गर्दा पनि प्रतिकार गर्न सक्दैनन् । जीविकोर्पाजन गरेर खान सक्ने कुनै उपाय छैन । खतराको आभाष गर्न सक्दैनन् । व्यक्तिगत सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सक्दैनन् । कसैले आफूमाथि सांघातिक हमला गर्दा पनि प्रतिकार गर्न सक्दैनन् । कोहि आफै आक्रामक हुन्छन् ।